Umhla My Pet » Kubaluleke Kangakanani Sex?
ngokuthi Lisa Angelettie
ukubuyekezwa: UCanzibe. 30 2020 | 2 min ukufunda
UMariya Ryan *(amagama atshintshiwe) sisibini ukuba uninzi abahlobo babo ingumona. Baye bobabini izidanga ekholejini kunye imisebenzi kakhulu. Akukho abantwana kodwa. Kodwa Condo okukhulu amanzi kwindawo lwenqila. Ke imali bekhululekile kwaye nothando. Wonke umntu wacinga ukuba likufutshane Njengoko kufika “isibini egqibeleleyo”.
Yintoni abahlobo isibini akazange azi ukuba kukho imfihlelo uMariya Ryan ukuba amaxhala ezinye ulwalamano lwabo 4 kwiminyaka. Abazange ngesondo.
Ibali ryan ngayo…”Ndiyithanda kakhulu mna eluthandweni enoMariya. Kodwa isizathu kuphela ukuba andiyi kuba ebemzekile noko kungenxa andithanga ndiziva neqhayiya okanye ngenyama ngesondo lakhe. Ndinomdla kuye, kodwa ndinokukwazi okanye iintsuku ngesondo naye. Mna nje musa ukucinga ukuba yayo emikhulu usebenziswano nangona. mna”mhlawumbi oya ukundulula kungekudala.”
Ibali kaMariya…”Thina ngesondo malunga 4 amaxesha ngonyaka. Bendiya ndithi nabani na ukuba. Ndiyazi yayo eqhelekileyo. Ndithetha URyan mkhulu ngezinye iindlela ezininzi kangaka – Andiqondi ukuba kuya kuchaphazela nendle-. Kodwa ngamanye amaxesha mna uyazibuza – na kum? Okanye ngaba kuye?”
Yikholwe okanye hayi – kukho ezininzi izibini nje URyan noMariya abo bangabi ngesondo rhoqo okanye obanelisa omabini amaqela. Yaye uninzi lwabo ukuthethelela ungenzi nto ngaloo nto kuba andicingi ukuba kumele ukuchaza ulwalamano lwabo. Abantu abaninzi abakulungele ukuphelisa ulwalamano esekelwe chemistry embi okanye unxibelelwano embi. Ingaba unga?
Ukuba eli bali izandi ngathi ebomini bakho — zikho izinto omele ucinge…
1. Ngaba ukuphila ubomi bakho kungekho babelane ngesondo rhoqo?
2. Kubaluleke kangakanani ngesondo kuwe? sele li soloko kubaluleke kangakanani?
3. Ngaba ucinga ukuba ngesondo yinxalenye ebalulekileyo ngomtshato okanye ixesha elide ulwalamano?
4. Ngaba wenza ukuqinisekisa ukuba akukho nto ngokwasemzimbeni okanye ayilunganga hormonally nangaluphina nawe?
5. Ngaba mhlawumbi kuni abanamava naluphi na uhlobo trauma ngokwesondo?
6. Umgqalile na kodwa uthetha leengxaki ngesondo okanye kwezinye iingcali ngobomi bakho ngesondo?
Kwiingcinga zam, ngesondo yinxalenye ebalulekileyo kakhulu elide- ubudlelwane elide. ngaphandle kokuba – kukho ndingabi ukuba abantu kusizalisa nezinye ubudlelwane, ukutya, ukungcakaza, utywala okanye ezinye izenzo zesondo (iPorn intanethi okanye ukuthandana iziza), etc.
kunye – Ukulalana yinto Kumnandi gqitha ngokupheleleyo ezonwabisayo! Musa kuphoswa yintoni ukuba yinxalenye nomvuzo ngokwenene solwalamano lwakho. Ukuba uyakwazi ukunxibelelana ngobomi bakho ngesondo kunye neqabane lakho – ngoko ke ixesha iinkcukacha zonxibelelwano jikelele. Kuya ekugqibeleni libe kwezinye iinkalo zobomi bakho. Fumana uncedo kufuneka ngoku okanye ukuba awukho ndingamcinezeli imali kodwa – ungafuna uyikhuphile yophuma ngexesha u nga.
isiphelo…URyan noMariya ekugqibeleni lokutshata ngesondo incinane bangen. Oko akuzange ukungena ingcamango kaMariya kwiphupha lwasemva, ngoko ekuphakuzeleni wanika Ryan mandikhethe. Unyango okanye utshitshiso. Benza ukunika unyango itrayi kodwa URyan wafumanisa ukuba kwakungekho kakhulu ukusebenza. Yena nje ndiyazingca ngokwaneleyo ngesondo okanye ngesondo kunye noMariya. Wayengaqinisekanga ukuba. Ngelishwa URyan noMariya eyahlukileyo Ngoku sixoxa nokwenzeka mtshato.